Ọnọdụ Atkins - Nri ekwe ka ma ghara ịhapụ | Nutri Nri
Ihe nri Atkins
Sergio Gallego | | Ahụike
Ihe nri Atkins bụ otu n'ime usoro nri ịmịcha ewu ewu kachasị ama ama nke dị adị ma mejupụta ịme nri dị ala na carbohydrates. Ndị na-agbachitere nri a, na-ekwusi ike na onye kpebiri iso atụmatụ a, nwere ike ghara ibu ibu na-eri protein na abụba niile ịchọrọ, ọ bụrụhaala na ị na-ezere nri ndị nwere carbohydrates.
Ọtụtụ nnyocha egosiwo na nri ndị na-edozi obere ume ha dị irè abia na ifelata nakwa na ha abughi oke ihe egwu ike.
Atin na nri nke Dr. Robert C Atkins n’afọ 1972, mgbe ọ kpebiri ibipụta akwụkwọ nke o kwere nkwa na ya ghara ibu ibu na-eso usoro ntuziaka na nsonaazụ ikpeazụ na-eju anya. Site n'oge ahụ, ọ ghọrọ otu n'ime kasị ewu ewu na nri n ’ụwa niile ruo taa.
Atkins nri usoro
Na mbu, ndị ọrụ ahụike nke oge ahụ katọrọ nri a nke ukwuu, n'ihi na ọ na-akwalite oke oriri nke Abụba abụba. Nnyocha ndị na-esochi egosiwo na abụba jupụtara na ya adịghị emerụ ahụ ahụ ike mmadụ.
E gosipụtawo na isi ihe ga-aga nke ọma na nri nha ndị dị dị ala na carbohydrates Ọ bụ n'ihi na site n'inwekwu protein, onye ahụ na-emeju agụụ ha nke ukwuu ma mechaa na-eri ọtụtụ ihe obere kalori nke na-enyere oke ọnwụ chọrọ.
1 Usoro 4 nke nri Altkins
2 Nri iji zere na nri Atkins
3 Nri ị nwere ike iri na nri Atkins n'enweghị nsogbu
4 Ihe ọụụ na nri Atkins
5 Ahụkarị nri maka otu izu na nri Atkins
Usoro 4 nke nri Altkins
E kewara nri Atkins a ma ama na ụzọ 4 dị iche iche:
Oge ntinye: N'ụbọchị ndị mbụ nke nri a, ị ga-eri obere karịa 20 grams nke carbohydrates kwa ụbọchị maka ihe dị ka izu 2. I nwere ike iri nri juputara na abuba, protein, na akwukwo nri. Na nke a na-adọ gị ida otutu ibu.
Usoro nhazi: Na nke a na-etinyere ha nke nta nke nta ụdị nri ọzọ iji zụlite ahụ. I nwere ike iri mkpụrụ, obere akwụkwọ nri carb na obere mkpụrụ osisi.
Oge mgbanwe: N’oge a, onye ahụ dị ezigbo nso inweta gị ezigbo ibu yabụ ị nwere ike itinyekwu carbohydrates na nri gị ma belata ọnwụ ọnwụ.
Oge mmezi: Na nke ikpeazụ a mmadụ nwere ike iri ndị cabohydrates na aru gi choro na ebughi oke ibu.
Fọdụ ndị na-agbaso ụdị nri a na-egwu usoro ntinye kpam kpam ma họrọ itinye nnukwu mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na nri. Nhọrọ nri a bara ezigbo uru na inweta ihe mgbaru ọsọ a chọrọ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ndị ọzọ na-ahọrọ ịnọ na oge ntinye oge ebighi ebi, a maara ya nke ọma nri ketogenic ma ọ bụ dị obere na carbohydrates.
Nri iji zere na nri Atkins
E nwere ọtụtụ nri ị kwesịrị izere iri nri mgbe ị nọ na nri Atkins:
Typedị ọ bụla nke shuga nke gụnyere ihe ọ softụ softụ dị nro, swiiti, ice cream ma ọ bụ ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi.
Onweghi nri ọka dị ka ọka wit, rye ma ọ bụ osikapa.
na mmanụ ihe oriri dị ka soybean ma ọ bụ ọka amachibidoro kpamkpam.
Mkpụrụ nwere nnukwu carbohydrates dị ka unere, apụl, oroma ma ọ bụ ube.
na mkpo dị ka lentil, chickpeas ma ọ bụ agwa na-ekwe na nri a.
E kwesịghị izere starch kwa, ya mere nduku ị gaghị enwe ike iri ha.
Nri ị nwere ike iri na nri Atkins n'enweghị nsogbu
Na-esote, m ga-akọwa ihe nri ma ọ bụrụ na i nwere ike iri na ụdị nri nri slimming:
Na-ekwe rie anụ dị ka ehi, anụ ezi, ọkụkọ ma ọ bụ toki.
Azụ na azụ dị ka salmọn, tuna ma ọ bụ sardines.
Nri dị ka nri nsen emi ị nwere ike itinye ya na nri a.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ha gụnyere ka ị nwee ike inine, broccoli ma ọ bụ kale.
Typedị ọ bụla nke akụ dị ka almọnd, walnuts ma ọ bụ mkpụrụ osisi ugu na-anabata ya kpamkpam.
Abụba ike nke ụdị mmanụ olive na-amaghị nwoke ọzọ.
Ihe ọụụ na nri Atkins
Ihe ọ drinksụ drinksụ na kwere na nri Atkins dị ka ndị a:
Nke mbụ Mmiri, nke zuru oke maka inweta mmiri zuru oke na iwepu nsị.
Kọfị A na-ahapụ ya n'ihi na ọ bara ọgaranya na antioxidants ma nwee ezigbo ahụike maka ahụ.
Ihe ọ drinkụ drinkụ ọzọ bara uru maka ahụike na nri Atkins na-enye ohere bụ tii.
Kama ị ga-ezere mmanya ndị nwere mmanya na ha nwere ọtụtụ carbohydrates dị ka biya.
Ahụkarị nri maka otu izu na nri Atkins
Na-esote ma mee ka o doo anya, m na-egosi gị ihe atụ nke ihe ọ ga-adị izu nri na nri Atkins. (Ntinye oge)
Mọnde: maka nri ụtụtụ ụfọdụ àkwá na akwụkwọ nriMaka nri ehihie salad salad tinyere ọtụtụ mkpụrụ na nri abalị a steak na akwụkwọ nri.
Tuzdee: Akwa na anụ ezi maka nri ụtụtụ, ọkụkọ na akwụkwọ nri fọdụrụ site n’abalị gara aga na abalị maka nri ehihie a cheeseburger na akwụkwọ nri
Wenezdee: n'oge nri ụtụtụ ị nwere ike iri otu omelette na akwụkwọ nri, n'oge nri ehihie a salad na n'abalị a sautéed anụ na akwụkwọ nri.
Tọzdee: Akwa na akwụkwọ nri maka nri ụtụtụ, nke fọdụrụ na nri abalị ụnyaahụ na nri ehihie, na nri abalị salmọn na bọta na akwụkwọ nri.
Fraịde: maka nri ụtụtụ anụ ezi na àkwáMaka nri ehihie, salad ọkụkọ nwere obere walnuts na anụ anụ na akwụkwọ nri maka nri abalị.
Satọde: maka nri ụtụtụ omelette na akwụkwọ nri, maka nri ehihie nke fọdụrụnụ meatballs si abalị tupu na nri abalị ụfọdụ anụ ezi na akwụkwọ nri.
Sọnde: Akwa na anụ ezi maka nri ụtụtụ, anụ ezi anụ ezi maka nri abalị na nri abalị grilled ọkụkọ nku na akwụkwọ nri.
Echere m na m dokwuo anya niile obi abụọ banyere nri Atkins, ọ bụ ụzọ dị mma ma dị irè iji felata ma mezuo ọnụ ọgụgụ achọrọ. Nke a bụ vidiyo nkọwa iji mee ka ihe niile dokwuo anya banyere nri Atkins.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Ahụike » Ihe nri Atkins
Enwere m obi ekele maka ihe ha rụzuru banyere nri a, nke m na-ezube itinye ya, ebe m na-ebu otu mita na sentimita iri na isii na adị m otu narị na kilogram isii na ana m arịa ọrịa. I nwere ike iri mmiri ara ehi.
Zaghachi MARIA VILLAVICENCIO OLARTE
enweghị mmiri ara ehi, gbalịa izere anụ ezi, ọ bụ ezie na ị nwere ike iri ya, ọ ga - ebuli cholesterol gị, na ị nwere ike iburu grabs 20 kwa ụbọchị, yabụ ọ bụrụ na ihe nwere gram 1 ma ọ bụ 2 kwa otu, echela banyere ya nke ukwuu ma rie ya, ị ga-achọ mmetụta na ị na-a somethingụ ihe ụtọ. Chọpụta na ịntanetị kedụ nri shuga ị nwere ike iburu na ọnụọgụ carbs nke akụkụ nri nwere, ana m akwado ka ịzụta akwụkwọ ahụ makana ọ dị ebe ahụ.
A na-ahapụ mmiri ara ehi na chiiz na nri
Zaghachi MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO
wendy drain mgbidi dijo
Nwere ike iri ube oyibo na n'ime mkpụrụ osisi ahụlon na pọpọ na ụdị ụdị mmiri ara ehi na chiiz ị nwere ike iri, ekele
Zaghachi wendy drain mgbidi
Otu esi eme nkpuchi nhicha nke ulo
Mkpụrụ osisi rie ọgụ anemia